राजनितिलाई आहा भन्ने बनाऔं ! | Press Pati
राजनितिलाई आहा भन्ने बनाऔं !
पार्वती पाण्डे २०७७-०९-१८ ०८:१२ मा प्रकाशित
राजनैतिक नेतृत्व तथा नेताले भावी पिडिलाई दिएको संस्कार बडो बिचित्रको छ । सम्मानित व्यक्तिलाई गाली गलौच गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । पढ्नै नसकिने , आखाँले देख्नै नसकिने शब्दहरु सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट देखिन्छ । हाम्रा कलिला मुनाहरुलाई कता लगिदै छ ? युवाहरुले गाली गर्ने संस्कार सिकेका छन भने वालवालिकालाई पनि गाली गलौच गर्ने संस्कार सिकाइदै छ ।
यस्ता प्रवृत्तिहरुले समाज कतै अशान्ति तिर त धकेलिदै छैन भन्ने भान हुन लागेको छ । नराम्रा गतिविधिले राजनैतिक संस्कार विक्रिदै गएको छ । नेताले आफ्नो पार्टी ठीक र अरुको पार्टी बेठिक भन्ने र भाषणमा सत्तो सराप गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । कुनै नेताको निधन हुदा मलामी जाने , घोतारी जाने तर बाचुन्जेल सद्भाव गर्न नजान्ने नेताहरुले के को राजनिति गर्नु । मानिस एक पटक नमोरी सुखै छैन , कहिले सम्म बाँचिन्छ भन्ने पनि थाहै छैन । तर पनि नेताहरु एक आपसमा झगडा गर्न कहिल्यै नछोडने भए । अब राजनिति गर्ने नेताहरुले वुझ्नु पर्छ , हामीले हाम्रो छोरा छोरीलाई के सिकाइदै छ , कुन संस्कार सिकाइदै छ भन्ने बारे राम्ररी विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । सम्मानित व्यक्तिलाई अपशब्द प्रयोग गर्न लगाउने अनि खित्का छोडेर हास्ने नेताको संस्कार बनेको छ । सबै मिल्नु पर्छ , राम्रो काम गर्नेलाई राम्रो भन्दै हौसला दिनु पर्छ भन्ने चलन राजनितिमा हराउन थालेको छ । अब आउने पुस्ताले राजनिति भनेको गाली गर्ने , सम्मानित व्यक्तिलाई अपशब्द बोल्ने हो भनेर सिक्ने छन , वुझ्ने छन । घरमा पनि विद्रोह गर्ने छन ।
आफ्ना आमा वुवा आदर सम्मान गर्ने व्यक्तिहरुलाई उनीहरुले तिरष्कार गर्ने बेला नआउला भन्न सकिदैन । राजनितिमा नमिलेको विषयवस्तु छलफल गरेर समाधान गर्न पक्कै पनि सकिन्छ । किन नेताहरु त्यतातिर जादैन । पदको पछाडी लाग्ने देशमा दिगो शान्ती दिन नखोज्ने नेताहरु अब होशियार हुनै पर्छ । कुनै पनि दलका नेता कार्यकर्ताले अर्को दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई गाली नगरौं । सबै सँग सद्भाव राखौ । जनताको काममा तल्लिन भएर लागौ । दुःख पिडामा परेका जनतालाई मुहारमा खुशी देउ , विकासका काममा अबरोध नगर तब तिम्रो दलको पछाडि सबै जनता लाग्ने छन ।चुनाबमा तिम्रो दललाई नै भोट दिने छन । यसरी शान्ति सँग राजनिति गरौ. , राजनितिलाई ठगि खाने भाड नबनाऔं , सबैले राजनितिलाई तिरष्कार नगरी आहा भन्ने बाताबरण निमार्ण गर्ने काममा अब राजनैतिक दलले ढिला गर्नु हुदैन ।